Agaro Oligosaccharide Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide wuxuu leeyahay waxqabadyo bayooloji ah oo gaar ah, sida ka hortagga oksaydhka, anti-bararka, fayraska iyo ka hortagga colitis, iwm. Alaabta waxaa laga soo saaray oo lagu farsameeyay tiknoolajiyadda farsamaynta sayniska, tayada ayaa si buuxda u waafaqsan heer qaran iyo mid EU. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide waa nooca oligose oo leh shahaadada polymerization (DP) ee 2 ~ 12 kadib hydrolysis, taas oo leh vis hoose ...
Agarose waa polymer toosan oo qaab dhismeedkiisu yahay silsilad dheer oo isweydaarsiga 1, 3-ku xiran β-D-galactose iyo 1, 4-ku xiran 3, 6-anhydro-α-L-galactose. Agarose guud ahaan wuxuu ku milmaa biyaha markii la kululeeyo ilaa 90 ℃, wuxuuna sameeyaa jel fiican oo adag marka heerkulku hoos u dhaco ilaa 35-40 ℃, taas oo ah muuqaalka ugu weyn iyo aasaaska adeegsigiisa badan. Waxyaabaha lagu yaqaan 'agarose gel' waxaa badanaa lagu muujiyaa xoogga jelka. Awoodda oo sareysa, ayaa kafiican waxqabadka jel. Agarose daahir ah waa mid badan ...
Carrageenan Fujian Global Ocean kappa carrageenan waxaa sifiican looga diyaariyaa algae cas - Eucheuma, laga bilaabo ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate iyo β (1-4) 3,6-fuuqbax-D nus Qeyb ka kooban sulfate group ee laktoos. Shayga si cilmiyaysan ayaa loo farsameeyay oo tayada wax soo saarku ay si buuxda ugu hogaansan tahay heerarka qaranka Shiinaha iyo EU. Astaamaha kiimikada ● Kala-miirnaanta: aan lagu milmi karin biyo qabow, laakiin waxay ku barari kartaa xayndaabka xabagta, oo aan lagu milmi karin dareeraha dabiiciga ah, fudayd ...
Fujian Global Ocean kappa carrageenan waxaa badanaa laga diyaariyaa algae cas - Eucheuma, laga bilaabo ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate iyo β (1-4) 3,6-fuuqbax-D nus Qeyb ka mid ah kooxda sulfate ee lactose . Shayga si cilmiyaysan ayaa loo farsameeyay oo tayada wax soo saarku ay si buuxda ugu hogaansan tahay heerarka qaranka Shiinaha iyo EU. Astaamaha kiimikada ● Kala-miirnaanta: laguma milmi karo biyo qabow, laakiin waxay ku barari kartaa xayndaabka xabagta, oo aan lagu milmi karin dareeraha dabiiciga ah, oo si fudud ugu milmi kara w ...